Ukholo lwabafazi baseSiriya naseFenike kuYesu (Marko 7: 24-30)
24 Waphuma apho, waya emingceleni yaseTire naseTsidon, wangena endlwini, akayi kuba namnye umntu owaziyo; 25 Ngokuba umfazi othile, intombazana yakhe enomoya ongcolileyo, weva ngaye, weza, wawa ngasezinyaweni zakhe. 26 Owesifazane wayengumGrike, umSirofenike ngesizwe; Wambongoza ukuba amkhuphe umtyholi entombi yakhe.
27 Kodwa uYesu wathi kuye, Baqale bazalise abantwana; kuba akufanelekile ukuthatha isinkwa sabantwana, ukuphosa ezinja. 28 Waphendula wathi kuye, Ewe, Nkosi; kodwa izinja phantsi kwetafile zidla iinqabana zabantwana. 29 Wathi kuye, Ngenxa yeli lizwi hamba; Umtyholi uye waphuma kwintombi yakho. 30 Ekufikeni kwakhe endlwini, wamfumana uMtyholi waphuma, intombi yakhe yalala phezu kombhede.
Thelekisa : Mateyu 15: 21-28
Ukugqithiselwa kukaYesu kuMntwana weZizwe
Udumo lukaYesu lusasazeka ngaphaya kwamaYuda kunye nakwamanye amazwe - nangaphaya kwemida yaseGalili . ITire neSidon yayisenyakatho yeGalili (kwakuba yiyiphi iPhondo yeSiriya) kwaye yayiyizixeko ezibalulekileyo kwiindawo zakudala zaseFenike. Le yayingeyona indawo yamaYuda, ngoko kutheni uYesu wahamba apha?
Mhlawumbi wayezama ukufumana ixesha elizimele, elingachazwanga ixesha ukusuka ekhaya kodwa nakhona wayengenakugcinwa yimfihlo. Eli bali libandakanya isiGrike (ngoko ke iNtlanga kunokuba ngumYuda) kunye nomfazi waseSyrophenicia (elinye igama laseKhanani , ummandla phakathi kweSiriya neFenisia) owayenethemba lokuba uYesu enze ukunyaniseka kwintombi yakhe. Akwacaci ukuba uvela kummandla weTire neSidon okanye kwenye indawo.
Indlela uYesu awasabela ngayo apha ayimangalisa kwaye ayihambelani ngokupheleleyo nendlela amaKristu ayemchaza ngayo ngokuqhelekileyo.
Esikhundleni sokubonakalisa imfesane nenceba ngokubhekiselele kwintlekele yakhe, ukuthanda kwakhe kuqala kukumthumela. Ngoba? Ngenxa yokuba akayena umYuda - uYesu ufanisa nabangewona amaYuda kwizinja ezingenakudliwa ngaphambi kokuba "abantwana" bakhe (amaYuda) bazalise.
Kuyathakazelisa ukuba ukuphiliswa kukaYesu ngokumangalisayo kwenziwa kude.
Xa ephilisa amaYuda, wenza oko ngokwabo aze amthinte; xa ephilisa iintlanga , uyayenza kude kwaye engathinti. Oku kuphakamisa inkcubeko yangaphambili apho amaYuda anikwe ukufikelela ngqo kuYesu ngoxa wayesaphila, kodwa iintlanga zinikezelwa ukufikelela kuYesu ovusiweyo onceda kwaye uphulukise ngaphandle kobukho.
AmaKristu okhololi bamaKristu awavikela izenzo zikaYesu ngokubonisa okokuqala, ukuba uYesu wavumela ukuba iintlanga zincediswe ekugqibeleni ukuba amaYuda azalisekile, kwaye okwesibini, ukuba wakwenza ekugqibeleni wamnceda ngenxa yokuba wenza ingxabano enhle. Isimo sengqondo sikaYesu apha sisona sikhohlakali kwaye siqhayisa, siphatha umfazi njengento engafanelekiyo. Ngaloo ndlela, amaKristu anjalo athi, Kulungile kwaye ihambelana nemfundiso yabo yokuba uThixo wabo aqwalasele abantu abathile abangafanelanga ubabalo, imfesane kunye noncedo.
Lapha sinawo umfazi ocela kwiinyawo zikaYesu ngenjongo encinci - ukuba uYesu enze into ebonakalayo ukuba wenze ezininzi xa kungenamakhulu amaxesha. Kuya kuba kuhle ukuba ucinge ukuba uYesu akalahlekanga nantoni ngokwakhe ekuhambiseni imimoya engcolileyo ngaphandle komntu, ngoko ke yintoni eyayiza kubangela ukuba ayenze ukwenza? Ngaba akafuni nje ukuba iintlanga zikwazi ukuphucula ubomi babo?
Ngaba akafuni ukuba iintlanga zikwazi ukubonakala kwakhe kwaye zigcine zisindiswa?
Akukho nkqantosi yokufuna kwakhe ixesha kwaye engafuni ukwenza uhambo lokuncedisa intombazana-xa ivuma, uyakwazi ukuncedisa ukusuka kude. Ngokuqinisekileyo, unokuphulukisa ngoko nangoko nayiphi na umntu nayiphi na into eyayibangelwa kuyo kungakhathaliseki ukuba bakuphi na. Ngaba uyenza loo nto? Cha. Uyabanceda abo baza kuye baze bacele yena - ngamanye amaxesha uyamnceda ngokuzithandela, ngamanye amaxesha uyakwenza nje ngokungafuni.
Ngokubanzi, akusiyo umfanekiso ochanekileyo woMninimandla onke esiya kuwo. Oko sikubonayo ngumntu omncinci okhethayo kwaye akhethe abantu abancedayo ngokusekelwe kuloko ubuzwe babo okanye inkolo yabo. Xa kudibene "ukungakwazi" ukunceda abantu basekhaya lakhe ngenxa yokungakholwa kwabo, sifumanisa ukuba uYesu akahlali eziphatha ngendlela enomusa nangomnceda-nangona xa ekugqibeleni ekuhambeni kwakhe ukushiya imivumba kunye neenkomo ngenye indlela "ayifanelekanga" phakathi kwethu.